रोजगारीका लागि पोल्याण्ड जान कति खर्च लाग्छ होला ?
Thu, Aug 13, 2020 | 13:41:16 NST
प्रश्नः पोल्याण्डमा नेपाली कामदारको मागको बारेमा सुन्दैछु। यदि त्यो बैधानिक हो भने, कृपया यस बिषयमा बिस्तृत जानकारी को आशा राख्दछु। रोजगारीका लागि जान कति खर्च लाग्छ होला ?
उत्तरः सन्तोष जी, पोल्याण्ड रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खुल्ला गरेको देश हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङका अनुसार, पोल्याण्डले कृषि र कुखुरा फार्ममा कामदार लैजान्छ। तपाईंले भरपर्दो म्यानपावरबाट पोल्याण्ड जाने प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। पोल्याण्डका लागि भिसा नेपालबाट लाग्दैन। म्यानपावर व्यवसायीले भारतको दिल्लीमा रहेको पोल्याण्डको दूतावासबाट भिसा स्टाम्प लगाइदिन्छन्। पोल्याण्ड जानका लागि ८० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न पर्छ।